नेपालको माटोमा भारतको बाटो ; रमेश प्रसाईं, भाग्य न्याैपाने लाई हेर्नुहोस् « Tattatokhabar
नेपालको माटोमा भारतको बाटो ; रमेश प्रसाईं, भाग्य न्याैपाने लाई हेर्नुहोस्
रमेश प्रसाईं लाई सबै ले चिनेका पनि छन् । रमेश प्रसाईं एउटा खरो बोल्न सक्ने क्षेमताका व्यक्ति मानिन्छ्न । देशमा भईरहेको राजनितीक घटानाहरु को बारे उनले खरो खण्डण गर्दछ्न । उनलाई साथ र सपोट नेपाली युवा पिडिले दिदै आएको देखिन्छ । सामाजिक संजालमा उनी देशमा भएको बेथिती को बारे फेसबुक लाइभ मा नै आएर कडाइका साथ जवाफ दिने गर्दछ्न । पहिला पनि भारतीय जनताहरु लाई उनले हिन्दि भाषामा नै जवाफ साथै चेतावनी पनि दिएका छन् । लिपुलेक र कालापानी त एउटा उदाहरण मात्रै हो ७१ ठाउँमा नेपालको सिमाना मिचिएको छ।
लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको बिषयलाई लिएर भाग्य न्याैपाने ले रमेश प्रसाईं संग हामी नागरिकले आफ्नो ठाँउबाट कसरी आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केहि आवाज उठाउनु भएको छ ।
विभिन्न ठाँउबाट लिपिलेक जाने भनेका छन् आम नेपाली भएर हामीले हाम्रो तर्फ बाट के गर्न सकिन्छ ?
प्रमाणु बमको जमानामा भारत संग खुकुरी ले लडिन्छ ! यो सबै मुर्खता हो सम्भव छ ! अहिले दरो कुटनितीको आवस्यक छ । हाम्रो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु जरुरी छ । विश्वव्यापी मन्चमा आवाज उठाउन जरुरी छ ।
एकपटक राजा महेन्द्र र भारतको गृहमन्त्री सरदार पट्टेलको भेटबर्तामा सरदार पट्टेलले राजा महेन्द्र लाई प्रस्ताव राखेरे “तपाईंको यो नेपालीलाई पनि भारतमा गाभौ न भनेर । त्यो बेला राजा महेन्द्र ले भने रे प्रस्ताव राम्रो छ गाभ्ने भए गाभौ भारतलाई नेपालमा गाभौ तर देशको नाम चाहिँ नेपाल राखौं भनेछन् । त्यतीबेला हाम्रा कुटनितिक हाम्रा शासकहरुको हाम्रो आफ्नो कुरा राख्ने तर्क राख्ने शैली हिम्मत तागत दरो थियो र हामीलाई छिमेकीको हेपाइ कम थियो तर अहिले शासक नै स्याल भएपछी हामी बाघ भएर के गर्नु ।
तस्वीर सामाजिक संजाल बाट साभार
सामाजिक संजाललाई टाइमपासको माध्यम चटक प्रदर्शन गर्नको लागि मात्रै प्रयोग नगरौं । सामाजिक संजाल मार्फत सेयर गरेर हाम्रो सिमा मिचाइको पिडालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण बनाउन सहयोग गरौँ । लिपुलेक कालापानी त एउटा उदाहरण मात्रै हो ७१ ठाँउमा नेपालीको सिमाना मिचिएको छ । आफ्नो इतिहासको स्मरण गरौँ । राजनितीज्ञहरुले कुर्सी मात्रै टिकाउने र नागरिकहरूले व्याक्तित्व मात्रै बिकाउने यश खालको नौटङ्कि यसखालको स्वार्थ छोडौँ । तब मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता सम्भब हुन्छ , तब मात्रै हाम्रो लिपिलेक कालापानी फिर्ता हुन्छ ।
हामिले गर्न सक्ने भनेको बढी भन्दा बढी सामाजिक संजाललाई प्रयोग गरेर आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाएर विश्वभरिका धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु सम्म यो अतिक्रम हेपाइको बेदनालाइ पुर्याउनु पर्छ र दरो कुटनिती चालोस भनेर हाम्रो सरकारलाई पनि झक्झकाउनु पर्छ।